Tsy Misy Toerana Ho An’ny Angamba Intsony ao Tiorkia · Global Voices teny Malagasy
Tsy Misy Toerana Ho An'ny Angamba Intsony ao Tiorkia
Voadika ny 18 Avrily 2017 3:23 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Français, Português, Español, English
Ny Lapam-panjakana Ak Saray ao Ankara. Creative Commons. An'ny mpanoratra Ex13.
“Voapasaka roa eo afovoany tahàka ny pasteky ity firenena ity,” hoy ny naverimberin'i Hasan Celik mpanadihady resaka politika, nandritry ny resaka mivantana nalefa tao amin'ny CNN Tiorka raha mbola nitsitaitaika ny fahatongavan'ny vokatra avy amin'ilay fitsapankevibahoaka momba ny lalàm-panorenana natao ny 16 Aprily.
Tany am-boalohany ry zareo dia nampiseho fandresena mazava azon'ny “Eny” tao anatin'ilay fifidianana natao hanomezana fahefana vaovao midadasika kokoa ho an'ny asan'ny filoha, izay anaram-boninahitra tany aloha, ary ny Filoha Recep Tayyip Erdogan no mitazona azy amin'izao fotoana izao. Taorian'ny alina iray toa tsy hitsahatra dia nihatery hatrany ny elanelan'ny isa, ary nitombo ireo fitarainana fisianà tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana.
Araka ny fanisàna vonjimaika, nandresy tamin'ny 51,3% monja ny “Eny”.
Ireo fanovàna nankatoavina tamin'ny Alahady dia hanome fahefàna ny filoha vaovao, tsy mila mandalo dingàna mpanamarina, handrava ny antenimiera ary hanendry minisitra na manampahefana ambony. Izy ireny dia hahafahany manendry ny antsasak'ireo mpitsara loholona, miantso fitsapankevibahoaka, manambàra fepetra milaza hamehana ary mamoaka didim-panjakana tonga dia manana hery toy ny lalàna. Manamarika ny fifarànan'ny repoblika parlemantera ao Tiorkia izy ireny.
Tao anatin'ny fepetra fanao amin'ny tany misahotaka no natomboka ilay fampielezankevitr'i Erdogan, taorian'ilay ezaka fanonganana tsy tontosa tamin'ny fahavaratra lasa teo, izay niteraka fanenjehana tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana ho nanao heloka bevava nataony an'ireo politisiana mpanohitra sy ireo mpilaza vaovao tsy lanilanin'ny vavoniny.
Nandresy nanerana ny firenena io, saingy resin'ny “Tsia” tany amin'ireo tanàndehibe fanalahidy, toa an'i Ankara, Istanbul sy Izmir, nanasongadina ny fanoherana tsy mitsahatra mitombo ataon'ireo mpanohitra ny antokony AKP (Antokon'ny Marina sy Fampandrosoana).
Elanelana kely, Fiantraika goavana: ilay Tiorkia vaovao
Ho an'i Erdogan sy ny AKP, ireo maro an'isa sy lalao henjana mba hahazoana azy ireny no lohahevitr'ireo taona roa lasa. Tamin'ny Jona 2015, tampoka teo very fifehezana ny parlemanta ilay antoko, izay nibahana toerana tamin'ny politikan'i Tiorkia talohan'ny taonarivo, satria sambany ny antenimiera, tamin'ny alàlan'ny fifidianana nampivarahontsana, no nitsofohan'ny Antokom-Bahoaka Demaokratika (HDP),mpomba ny Kiorda, mpiandany amin'ny elatra havia.
Tsy nahavita niray hevitra hanangana governemanta iarahana mitantana, anefa, ireo antoko efatra tao amin'ny antenimiera. Io no nandravona ny làlana ho an'ny fifidianana iray vaovao tamin'ny Novambra, izay nanaovan'ny AKP fanentanana iray nifototra betsaka tamin'ny ramatahora, ankoatry ny famelezana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny hetsika ara-tafika nataon'ny fanjakana tany amin'ny faritra atsimo-atsinanana tena fonenan'ireo Kiorda ao amin'ny firenena. Niverina nahazo ny maro an'isa ilay antoko.
Taorian'ny fitsapankevibahoaka natao ny Alahady, na ireo mpikambana avy amin'ny antoko AKP aza dia naneho ny hagagany tamin'ireo vokatra henjana be.
‘Tsy izay nampoizinay ny vokatra’ hoy ny Praiminisitra lefitra Veysi Kaynak
Nandresy tamin'ny fitsapankevitra i Erdogan, saingy resy tany aminà tanàna telo lehibe tao Tiorkia, isan'ireny i Istambul, sambany hatramin'ny 2002
Izao anefa, tao anatin'ny kabarim-pandresena nataon-dry zareo, na ny praiminisitra amperinasa, Binali Yildirim — izay nesorina ny lahatsoratra nalefany vokatry ny fanovàna ny lalàm-panorenana — na ny Filoha Recept Tayyip Erdogan, dia samy tsy nanisy sira ireo mpifidy 48 % izay nifidy nanohitra ilay fanovàna.
Fanitsakitsahana mampitroatra ny mpanohitra
Tsy nisy ihany koa fanamarihana avy amin'ilay ranamana momba ireo lazaina fa fanitsakitsahana nanimba ny endriky ny fifidianana.
Niparitaka be tao amin'ny media sosialy ity lahatsary ity ary efa nasongadin'ireo fantsom-pahitalavitra Tiorka mihitsy aza taorian'ny nampitàna mivantana ny vokatry ny fifidianana.
Taorian'ity lahatsary nalefan'ny CHP ity dia nanomboka nitroatra ny media sosialy. Fiparitahan'ny filazàna fanafoanana
Nisy ihany koa resabe momba ny fanitsakitsahan'ny Filankevitra Ambony misahana ny Fifidianana ao Tiorkia, nanova fepetra iray goavana mamela ireo manampahefana amin'ny fifidianana hanisa ireo vatom-pifidianana tsy nisy fitomboka, na dia voararan'ny lalàna mifehy ny fifidianana aza izany.
Milaza ny Filohan'ny Filankevitra Ambony misahana ny Fifidianana ao Tiorkia fa neken'izy ireo ireo vato tsy nisy fitomboka, izay raha ny ara-dalàna dia tsy manankery, mba haneho ny safidin'ny mpandatsabato
Vokatr'ireny sy ireo fandikan-dalàna hafa, notsipahan'ireo antoko mpanohitra ny valim-pifidianana, zavatra izay tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny tantaran'ny vaninandro maoderina tao Tiorkia.
Na ny CHP, na ny HDP, antoko faharoa sy fahatelo lehibe indrindra ao Tiorkia dia samy tsy nisy nankato ilay voka-pifidianana. Sambany tao anatin'ny 70 taona no nisian'izany noho ny antony mazava
Nanodidina ny tamin'ny 11 ora alina tany an-toerana, nanomboka nizara lahatsary ireo sehatra fampiasan'ny olontsotra mpanao gazety, nampisehoana ny zavatra nitranga nikarakaràna hetsi-panoherana tany amin'ny manodidina an'i Istambul, tao Kadikoy, Moda, Besiktas sy Cihangir.
Nisy ihany koa ny tabataba mahazatra tonga avy amin'ireo faritra maro manodidina ; vely lapoaly sy vilany, izay lasa hetsika fanoherana mahazatra nandritry ny hetsi-panoherana tao Gezi tamin'ny 2013 izay nametraka sehatra iray ho an'ny fanoherana iarahana miketrika hanoherana ny fitondran'i Erdogan.
Nanomboka nifamory koa ireo olompirenena tao Besiktas rehefa nahita ilay voka-pifidianana niteraka resabe
Tsy nihontsona ny filoha Erdogan, tamin'ny fanaovany fanamarihana hoe ao anatin'ireo fanapahankevitra voalohany horaisiny amin'ny maha-filoha sahy azy ny fampidirana ny sazy faratampony, ‘fanamelohana ho faty’, fony izy nikabary teo an-davarangany izay toy ny manosika bebe kokoa an'i Ankara hanalavitra ny faniriany hiditra ho ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana.
Fanomezantoky iray ho an'i Tiorkia no nomen'i Erdogan tao anatin'ny kabarim-pandreseny: hamerina ny fanamelohana ho faty. Aiza no hatomboka?
Sady niteraka horohoro, no nitondra firavoravoana tamin'ny fatra mila hitovy ny voka-pifidianana. Saingy nisy marimaritra ankapobeny iray niraisana mahakasika zavatra iray: hatraiza ny fiovàna hita tao Tiorkia tato anatin'ny taona vitsy.
Raha mbola mitsakotsako ny valim-pifidianana isika dia aoka tsy hanadino fa: 153 ireo mpanao gazety no mbola hatory any anaty karakara vy ao Tiorkia
* Ny dika taloha (amin'ny teny Anglisy) tamin'ity lahatsoratra ity dia nilaza ireo teny nataon'i Hasan Celik tao amin'ny CNN Tiorka. Tena mpanolotra fandaharana ao amin'ny CNN Tiorka i Celik, saingy tao amin'ny Kanal D izy no nilaza ireny teny ireny, ary mpandalina nahazo fanasàna no nivahinianany tao.